ကော်နာစောင့်နီရေ ဘောလုံးသမား နှစ်ယောက်
တယောက်ကို တယောက် ဖက်ထားပိုင်ချောင်။
ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုပစော်" လို.ပြောရေဂါ..
အဂုက မိတ်ဆွေတိဂျေးယာ ရန်သူ ဖြစ်ဖြစ်လခရေ။
ငှက်နှစ်ကောင် သူရို. ရလားရေ။
သွီးထားစော် ဓားတိ သံချီးတက်မလားလီအောင်
မူရင်း ကဗျာဆရာ ကောင်းကင်ကိုပါ။ ခံစားချက်နဲ. တိုက်ဆိုင်လို. ဘာသာပြန်လိုက်စော် ဖြစ်ပါရေ။ ရခိုင်သားတိကို တတည့်ကြည့်ပနာ ပြောနီလားမှတ်ရရေ။ မူရင်းကဗျာက ဗမာပိုင်ပါ။ အေမှာဖတ်လို.ပါရေ။
Posted on - 580 Comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သတင်းလာပီးပါရေ။ အကျွန်ရွီးထားရေ ရခိုင်သားမယားတရာ ရစီဖို. ဆိုစော် ပို.စ်ကို အေအမ်ပီမှာ လူတစ်ယောက် က တင်ထားပါရေ သူရွီးပိုင်ဗျယ် လတ်။ ရွီးရေလူနာမည်ကိုလေ့ မဖော်ပြထားပါလတ်။
အကျွန်.သူငယ်ချင်း အကောင့်နန်. အေအမ်ပီ ကို ဝင်လို. ကြည့်ခီမှာ ဂွင်တိုက်တွိပါရေ။ http://thearakanesemeetingpoint.com/forum/topics/2206333:Topic:786512 အေလင့်ခ်မှာ ဖတ်ကြည့်လို.ရပါရေ အကောင့်ရှိဂေ။ စာပုဒ်ပြတ် ကော်ပီ ပေ့စ် လုပ်ထားစော် ဖြစ်ပြီးကေ ကိုယ်မရွီးကြောင်းလေ့ မဖော်ပြထားရေအတွက်နဲ. မသိရေလူတိ အတွက်ကတော့ သူရွီးရေလို.ထင်ပါဖို.။ အေစာပုဒ် ကောင်းဒဏ်ကိုလေ့ သူခံရပါဖို. ဆိုးဒဏ်ကိုလေ့ သူခံရပါဖို.။ အောက်မှာ လထားကရား ဝင်ဆွေးနွေးထားစော်ကို ဖတ်ကြည့်ပြီးကေ အကျွန် နားလည်လိုက်စော်က အေလူတိစော် ငါဆိုလိုချင်ရေ အဓိပါယ် ကို အဂုထိ သဘောမပေါက်နိုင်ကတ်သိ မနားယေ ဆိုစော်ကိုပါ။
အကျွန် အေစာပုဒ်ကို ရွီးဖြစ်ခရေ အကြောင်းကို တစ်စိချေ ပြောပြပါမေ။ အကျွန် အေအမ်ပီမှာ Active မမ်ဘာ တစ်ယောက် ဖြစ်ခခါ မယားတစ်ရာ စော် အကျွန် ပထမ ရွီးခရေ ပို.စ်ပါ။ အကြောင်း ကတော့ ယင်းတလော က Discussion Forum မှာ ရခိုင်သားတိ မယား ၃ ယောက် ယူသင့် မယူသင့် ဆိုပြီးကေ ဆွေးနွေးနီကတ်ပါရေ။ အကျွန်ရို. မမချေတိ ကောင်းအမြင်ကတ်ကတ်ပါရေ။ လက်တွိမှာ တစ်ယောက်တောင်မှ မရလို.မှိုင်နီရရေလူတိက သုံးယောက်ယူဖို.လေး ဘာလေးနဲ.။ ရခိုင်သမတိ ဇာဖြစ်လို. ဗမာနောက်စီပါလခလေ။ ရခိုင်သားတိ စကားမချို ယက်မချို၊ အပြောမတတ် အဆိုမတတ်နန်. အရက်ချေကလေ့ သောက်သိရေ။ မမချေတိပိုင် ရန်ကလေ့ လိုကတ်သိရေ။ ကောင်းရလိမ့်မေ မယားသုံးယောက် ဆိုပြီးကေ ရခိုင်သား မယားတရာ ဆိုရေနာမည် နဲ. အကျွန် သရော်စာ သဘောမျိုးနဲ. ရွီးခစော်ပါ။ ဇာလောက်ပင်ဆိုးဆိုး ကောင်းရေ အချက်ချေတိလေ့ ရှိပါသိရေလေဆိုပြီးကေ ရိုးသားရေ ကြိုးစားရေ ဆိုစော်တိကို ပါထပ်လို. ရွီးဖြစ်ခပါသိရေ။ စာပုဒ် ကို ဖတ်ကြည့်ကေ သိသာပါရေ. ပြင်ဖို. အများကြီးလိုသိရေ။ အေအချက်ကို ပြင်ဆင်ကေတော့ မယား ၃ ယောက်မပြောကေ့ မယားတစ်ရာ တောင်မှ ရပါဖို.ထောလို. အတိသယဝုတ္တိ အလင်္ကာနဲ. ရွီးလိုက်စော်ပါ။ ယင်းချင့်ကို စာပိုဒ်ဧ။် ဆိုလိုရင်းကို သဘောမပေါက်နိုင် ခေါင်းစိုင် ကြည့်ပြီးကေ ဝေဖန်နီကတ်တေ လူတိဧ။် Level of Intelligence ကို အကျွန် သံသယ ဖြစ်မိပါရေ။
အေအမ်ပီက ထွက်စော် ၂ နှစ်လောက် ရှိလားပါဗျယ်။ ယဂေလေ့ အကျွန်.အယူအဆတိစော် မပြောင်းပါသိ။ ယင်းပို.စ်က အတိုင်းပါသိ။ အကျွန်အေအမ်ပီကထွက်ပြီးရေနောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာ ပျက်လားရေ အတွက်နဲ. ယင်းစာပိုဒ်တိ ကို အားလုံး ဆုံးရှုံးလားပါရေ။ အဂုတော့ အဂုပိုင် ပြန်ပေါ်လာစော်ကို ကျေးဇူးတင်ရဖို.ပိုင် ဖြစ်နီဗျယ်။ အကျွန်.ပို.စ်ကို ဖျက်ပီးဖို. အေအမ်ပီ အက်ဒမင် ကိုတောင်းဆိုချင်ပါရေ။ အကျွန်ရွီးရေ ဘလော့ ကိုကောင်းရေလို.ထင်လို. တင်ပီးရေ လို.ယုံပါရေ။ ယဂေလေ့ သင့် တင်ရေလူစော် ယင်းပို.စ်ဖက် က ဇာလောက် ခုခံပြောဆိုနိုင်ပါဖို.လေး။ အကျွန်ရွီးရေ စာဖက်က အကျွန်ရပ်တည်ရပါဖို.။ ကာကွယ်ရပါဖို.။ ကိုယ်မှားရေ လို.ထင်ကေလေ့ ဝန်ခံနိုင်ရပါဖို.။ ဆွေးနွေးနိုင်ရပါဖို.။ အကျွန် အေအမ်ပီမှာ မမ်ဘာမဟုတ်တေ အတွက်နဲ. လိုရင်းကိုမမြင် ကရိုက်ကထိုက်ပီးထားရေကွန်မန်.တိ အတွက် အကျွန် ပြန်ပြီးကေ မပြောနိုင်ပါ။ ယင်းတွက်နဲ. ဖယ်လိုက်စော် ကောင်းပါဖို.။ မူရင်းပို.စ်ကို အောက်မှာ ပြန်ပီးကေ တင်ပီးလိုက်ပါရေ ( ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်) သတင်းပီးလာရေ သူငယ်ချင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါရေ။
ရခိုင်သားတိ မယား ၁၀၀ ရစီဖို့????
AMP က discussion တိမှာ
ရခိုင်သားတိ မယားသုံးယောက် ယူသင့်မယူသင့် ဆွေးနွေးနီကတ်စွာကို အမြဲတမ်း
မြင်နီရပါရေ။ မယားသုံးယောက်ရဖို့ထားလို့ တယောက်တောင်ရှာလို့မရရေလူတိ
အများကြီး။ တချို့ကလည်း ရခိုင်သမတိ ရခိုင်သားကို မကြိုက်စွာ
ဇာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကေ မီးနီကတ်တေ။ သေချာစွာကတော့ခါ ရခိုင်သမတိုင်း
တတ်နိုင်ကေ ရခိုင်သားကိုပဲ ယူချင်ရေဆိုစွာပါ။ ယေကေလည်း ဇာဖြစ်လို့ တချို.က
လူမျိုးခြားတိနောက်ကို လိုက်လားခရရေလဲ။ တချို.ကလည်း အဖြေမရှာပဲနန့်
မမချေတိကိုပဲ အပြစ်ပုံချကတ်တေ။ လူတိုင်းမှာကိုယ့်အားနည်း၊ အားသာချက်တိ
ကိုယ်စီဟိကတ်တေ။ အခု ရွီးပြချင်စွာကတော့ ရခိုင်သားအများစုမှာ Common ဖြစ်တေ
အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တိနန့် မမချေတိရွီးချယ်ရေအခါ ဇာအချက်တိကို
ရခိုင်ဆိုပြီးကေ အမျိုးမာန်တက်စွာထက် တချို.ကလွန်ကဲပြီးကေ
ဘဝင်ကိုင်ရေအဆင့်ကိုရောက်လားခရေခါ မမချေတိကို ဖွင့်မပြောဖြစ်ပဲနန့်
ဝါးလုံးခေါင်းထဲမှာပဲ လပပြီးကေ အခါလွန်မိုးဖြစ်လားခစွာများပါရေ။ အချေခါကပင်
gender ကို ကောင်းကောင်းအလေးပီးပြီးကေ ခွဲခြားထားကတ်စွာလည်းး ပါပါဖို့။
ကိုယ့် ရခိုင်ပြည်မှာက မမချေတယောက်မှာ ကလေချေသူငယ်ချင်း (၃၊ ၄) ယောက်ဟိကေ
ယှုပ်တေဆိုပြီးကေ အပြောခံရရေ။ ယင်းချင့်တိက တကယ်တမ်း relationship တခုအတွက်
approach လုပ်တေအခါ smooth ဖြစ်အောင်မပြောတတ် မဆိုတတ်ဖြစ်စီရေလို့ ထင်ပါရေ။
ငြင်းလိုက်ဖို့စွာကို ကြောက်လို့လည်း ဟိပါဖို.။
ရည်းစားကိုချစ်လို့ တပိုင်းသီဖို့ပျာယ်။ ယေကေလည်း ပါးစက သူငယ်ချင်းတိကိုပြောကေ မိုးလားကဲလား၊
အားနာလို့ လက်ခံထားရရေဆိုရေ ပုံစံမျိုး အသံကောင်းဟစ်တတ်တေ။ အထူးသဖြင့်
ယောက်ျားအချင်းချင်းကြားမှာ မယားနိုင် ကောင်းကောင်းဖြစ်ချင်ကတ်တေ။
ချစ်ကေလည်း ချစ်တေလို့မပြော။ ယင်းအပိုင်းမှာက ကိုယ့်စိတ်မှာ (၁) ဆချစ်ကေ
(၁၀) ဆချစ်တေလို့ပြောတတ်တေ မြန်မာတိနှင့် အမှတ်ကွာလားပါပျာယ်။ မမချေဆိုစွာက
ယင်းပိုင်ပြောမှ သဘောကျရေ။ ယူပြီးခါ ဖျာပိုင်ခင်းပြီးနင်းထား နင်းထား၊
မရခင်ကတော့ ထိပ်မှာတင်ထားမှ။ အဓိကက ပြောဆိုဆက်ဆံရေးမှာ
ကိုယ်ယှုံးကေ၊ ငြင်းခံရကေ ခါးခါးသီးသီးတုန့်ပြန်ရေ။ အငြင်းပယ်ခံနိုင်ရေသတ္တိမဟိ။
တဖက်သားကိုအပြစ်ပုံချပြီးကေ ကိုယ့်အပြစ်ကို ဝန်မခံတတ်။ စွပ်စွဲစွာ
ပြင်းထန်ချင်ကေလည်း ပြင်းထန်လီပါဖို့။ လူတိုင်းမဟုတ်ကေလည်း
တော်တော်များများမှာ တွိရလို့ စိတ်မကောင်းပါ။ အထူးသဖြင့်
ရည်းစားစကားပြောလို့ မမချေဖက်က လက်မခံနိုင်လို့ငြင်းလိုက်ကေ
အပြစ်ဆိုဖို့တော့ နည်းနည်းခက်ပါရေ။ ရခိုင်စွာ male dominant ဖြစ်တေ society တခုပါ။
ထမင်းစားတိုင်း လင်ကို အယင်ဦးချရရေနီရာက လာလူတိဆိုခါ
အနောက်တိုင်းကိုရောက်လာရေအခါမှာ lady first ဆိုပြီးကေ ထမင်းဝိုင်းမှာ
မမချေကို အယင်ဦးစားပီးထည့်ပီးရေ စနစ်နန့် မရင်းနှီစွာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါ။
ယေကေလည်း အခု oversea ကိုရောက်နီရေလူတိကတော့ သိသင့်ရေလို့ ထင်ပါရေ။ မမတိက
အားမနာလုပ်လို့ရရေလို့ ပြောစွာမဟုတ်ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် respect ဟိရဖို့လို့
ဆိုလိုစွာပါ။ Gender Discrimination တိကို လျှော့ဖို့လိုပါပျာယ်။
ဟုတ်ပါယင့်။ အဆဲခံလိုက်ပါအုံးမယ်။ တချို.ရခိုင်သားတိက ပြောပါရေ။ ရခိုင်သမတိဖော်စွာကို
ကြည့်လို့မရလတ်။ ယင်းချင့်ကိုတော့ နားမလည်။ ကိုယ့်အရပ်နန့်
ကိုယ့်ဇာတ်ဆိုစွာ ဟိပါရေ။ ကိုယ်နီရေ နီရာဒေသနန့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့
အရေးကြီးပါရေ။ စစ်တွေမြို့ကိုလားပြီးကေ မီနီစကပ်နန့် ဗန်းပြနီလို့ကတော့
ဇာဖြစ်ပါဖို့လဲ။ ကမ်းခြီမှာ ဘီက်ီနီဝတ်စွာ အဆန်းမဟုတ်။ ရခိုင်သမ
ဖော်စွာမကြည့်ဝံ့ကေ မျက်စိရာမှိတ်ထားကတ်ပါဖိ။ အတိုအကပ် (နိုင်ငံခြားမှာ)
ဝတ်တိုင်း ပျက်စီးနီရေလို့ထင်နီစွာကတော့ ကောင်းကောင်းရယ်ရစွာ အယူအဆပါရာ။
လူတယောက်၏စိတ်ဓါတ်နန့် အကျင့်စာရိတ္တကို ဝတ်ထားရေ အဝတ်အစားနန့်
စလို့လိုက်တေ ဆိုခါကပင် ကြုံလိုက်တိများရေ။ တနားချေလိုက်လို့မရကေ နောက်တယောက်ကို
ချက်ချင်းပြောင်းတတ်တေ။ ကုသ ပပဝတီကိုရစွာ ကုသက ဖုရားလောင်းဖြစ်လို့
မဟုတ်ပါ။ ဇွဲဟိလို့။ ယင်းပိုင်ဇွဲမဟိကတ်ပါ။ ရည်းစားဖြစ်ကေလည်းသင့် ကိုယ်ရာ
တလုံးချိုင့် ဖြစ်ချင်ဖြစ်ဖို့၊ မမချေကို ငါးဆင့်ချိုင့်လောက်နန့် perfect
ဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ကတ်တေ။ အမှားတခုလုပ်မိကေ ခွင့်မလွှတ်တတ်။ အားလုံးတော့
မဟုတ်ကေလည်း ရခိုင်သမတိုင်းလိုလိုပါးက ပြန်ကြားရစွာ စကားပါ။
တခြားအချက်တိကိုတော့ minor လို့ထင်ပါရေ။ relationship တခုတည်ဆောက်တေနီရာမှာ
အခုအားနည်းချက်တိကိုကြည့်လိုက်ကေ အားလုံး အပြောအဆို၊
အမူအကျင့်နန့်သက်ဆိုက်နီစွာကို တွိပါဖို့။ ရခိုင်သားတိ အရက်သောက်လို့
မယားမရဆိုစွာကို လက်မခံပါ။ ရခိုင်သားတိက အရက်သမားဖြစ်ရစွာ
ဂုဏ်ယူနီကတ်စွာကိုတော့ တွိပါရေ။ ထားလိုက်ပါဖိ ယင်းချင့်ကို။
ကောင်းရေအချက်တခုက ရခိုင်သားတိစွာ သစ္စာဟိရေလို့ ထင်ပါရေ။ မပြောတတ်
မဆိုတတ်ဆိုစွာက opposite gender နန့်တွိကေ ပြောစွာပါ။ လူကြီးသူမကိုတော့
အားလုံးသူသိတတ်ကတ်တေ။ ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန်ဟိရေ။ အားနာတတ်တေ။
စိတ်ရင်းကောင်ပြီးသားပါ။ အပြောမတတ်စွာ၊ Manner မဟိစွာချေတခုကို
ပျင်လိုက်ကေတော့ခါ မယားသုံးယောက်ကပြောကဲ့ အယောက် (၁၀၀)
လောက်ရဖို့သေချာပါယင့်။ ကိုယ့်ကို ဝယ်နိုးဝယ်နိုးစောင့်နီကေတော့ မပြောတတ်။
ဓညဝတီ နာမည်နဲ. ရခိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင် စီးတီးဟောမှာ ဖွင့်လိုက်ပါဗျယ်။
အေနိခါ ရောက်ခီပါရေ။ ဆိုင်ရှင် ဆက်ဆံရေးကောင်းလို. ဝမ်းသာပါရေ။ အကျွန.်အရုပ် ကိုမြင်စော်နဲ. ရခိုင်သမမှန်း တန်းသိရေ ။မည်းလို.တုံးလို. ဖြစ်လို.လားမသိ။ ဆိုင်က ထင်ထားပိုင် စားသောက်ဆိုင် မဟုတ်ပါ။ ကုန်စုံဆ်ိုင်နဲ. ငွေလွှဲ အဓိက လုပ်တေဆိုင်ပါ။ ယဂေလေ့ ဂုံးသုပ်၊ ကျောက်ပွင့်သုပ်၊ ငနီတူခြောက်သုပ်နဲ. ရခိုင်မုန်.တီရရေလို.ပြောပါရေ။ ရခိုင်မုန်.တီက စနီ၊ တနင်းဂနွီမှ ရပါရေလတ်။ မြည်းကြည့်ချင်လို. ဂုံးသုပ်တစ်ပွဲမှာစားခပါရေ။ စစပ်ချေလို. ပြောလိုက်ပြီးကေ မျက်ခုံးတိ ခလှုပ်လှုပ်ချေတွိလခပါရေ။ ရခိုင်သမ လက်ရာ စစပ်ချေဆိုဆိုစော် လျှာတိုပါလီအောင် စပ်ဖို.လားမသိ ဆိုပြီးကေ။ သုပ်ပီးလိုက်စော် က စားလို.ကောင်းပါရေ။ ရခိုင်သုပ်ပါ။ ဟုတ်ပါယင့် သေချာပါရေ။ ငရုတ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငပိ စကေချေနဲ. ထောင်းပြီးကေ ဆား အချိုမှုန်.အတန်နဲ. သံပရာသီးအားရပါးရ ဆမ်းလို. သုပ်စော်ပါ။ တစ်ပွဲကို ၃ ကျပ်ပီးရပါရေ။ ကြက်သွန်က တော့ မနည်းမဟုတ်များပါရေ။ ဂုံးတိအားလုံးကို ကုန်အောင်စားပြီးကေ ကြက်သွန်တိကို မစားနိုင်ရေအတွက် ယင်းအတိုင်းထားခရပါရေ။ ကြက်သွန်လျှော့ပြီးကေ နံနံပင်ချေပိုထည့်ပီးကေ ကောင်းဝမ်းသာပါဖို.ထော။ ၇ခိုင်မုန်.တီကို မြည်းကြည့်ချင်ပါယင့်။ စနီနိ လားဖို.လို.စိတ်ကူးပါရေ။း) နိခင်းဖက်အားကေ။
ဓညဝတီဆိုင်အရှိတတည့်မှာ သူငယ်ချင်းဆိုင်ရှိရေဆိုခါ ယင်းဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီးကေ လှမ်းလို. ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခပါရေ။ စင်္ကာပူ ပထမဆုံး ရခိုင်ဆိုင်ဖွင့်စော်ဖြစ်တေ အတွက်နဲ. စီးတီးဟောမှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားရေ သူငယ်ချင်း တရုတ်၊ ကုလား၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကရင် တိကို အနည်းဆုံးပြလို.ရပါဗျယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်မဟုတ်တောင်မှ ထော င၇ို. ရခိုင်ဆိုင်လေ့ ရှိယင့်လို.။ ရခိုင်သားအားလုံး လားလို. အားပီးခီဖို. မမိပါကေ့။ ဓါတ်ပုံထည့်ပီးလိုက်ပါယင့်။
ရွာတစ်ရွာမှာ မိအိုဖအို နှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးနီရေ ကလေ့မေချေ တစ်ယောက်ရှိရေဆိုပါဖိ။ ယင်းကလေ့မေချေစော် တစ်ရက်နိခါ မြစ်မှာ ရီကူးယင်းနဲ. ၇ီနစ်ပါရေ။ ယင်းခါ လှေတစ်စင်းလာလို.ကယ်ပါရေလတ်။ ယင်းလှေမှာ ရွာက အရွယ်တူကလေချေ ၃ယောက်ပါပါရေ။ ယင်းမမချေကို တစ်ယောက်က ဆင်းလို.ကယ်ပြီးကေ လှေထက်ကိုဆွဲတင်ဖို.လုပ်ကတ်ပါရေ။ ယေခါ ယင်းမမချေစော် ရုန်းပါရေ။ မတက်လိုပါလတ်။ ဇာဖြစ်လို.လေး ဆိုကေ ရီထဲမှာ ရုန်းယင်းကန်ယင်းနဲ. ထဘီ ကျွတ်ကျလားလို.ဆိုပါရေ။ အရှက်ကြီးရေလူဖြစ်တေအတွက်နဲ. အသက်ရာ အဆုံးခံပလိုက်ချင်ပါရေလတ်။ ယင်းနေရာမှာ ကိုယ်ရာဆိုကေ ဇာပိုင်လုပ်ဖို.လေးချင့်။
အရှက်နဲ. အသက်ကိုလှယ်ဖို.လား။ယင်းနေရာမှာ အကျွန်ဆိုကေတော့ ထဘီ ပါပါ မပါပါ တက်လာပါဖို.။ အမိ အဖကို အသူလုပ်ကျွေးဖို.လေး။ ကိုယ့်အရှက်ကိုကြည့်ဖို.လား ကိုယ့်အမိ အဖ ဘဝကို ကြည့်ဖို.လား။ အေအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတည်းကြောင့် ကိုယ့်အသက်အဆုံးရှုံးခံဖို.တန်လာ။ အားလုံးကို ထည့်စဉ်းစားကြည့်ရပါဖို.။ စစ်တွေမှာနီခါ ဆံတော်ရှင်ကိုလားလို. လမ်းမှာ ဘုတ်မှောက်ခါ ထဘီကျွတ်လားလို. ရီထဲက မတက်လာပဲနဲ. အသက်အဆုံးခံလားရေ မမချေတယောက်အကြောင်းကို ကြားဖူးပါရေ။ အချေခါက သူရဲကောင်းလို.မှတ်ခရေ။ ငါရာဆိုကေလေ့ ယင်းပိုင်အသက်ဆုံးခံပလိုက်ဖို.။ အရှက်အကွဲမခံ။ သီလို.အလောင်းပေါ်လာခါ တုံးလုံးပါရာ။ ဇာထူးပါလေ။
အရှက်နဲ. သိက္ခ္ခာကို ဇာပိုင်ခွဲခြားကတ်ပါဖို.လေးချင့်။ ငါရှက်တေ ငါသိက္ခာကျလို. ဆိုစော်မျိုးပြောချင်ကေ ဇာအကြောင်းနဲ.ရှက်လေ ဆိုစော်ကို အယင်မီးရပါဖို.။ သိက္ခာဆိုစော်ကို အကျွန်.အနေနဲ. ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာလို. ဘာသာပြန်ပါရေ။ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ. ပတ်သတ်တေ။ Integrity.မကောင်းစော်ကိုလုပ်ကေ ရှက်တတ်ရဖို.။ အကျွန်ရို. ဘာသာတရားနဲ.ပြောရကေ သိက္ခာဆိုစော် အကျင့်သီလဖြစ်တေ။ မကောင်းစော်ဆိုစော်ရေ သီလနဲ. မကိုက်ညီရေ အရာအားလုံးကို ခေါ်ပါရေ။ အခြေခံက ငါးပါးသီလ ဆိုကတ်ပါမေ။ ခိုးရေ ဝှက်ရေ လိမ်ရေ အရက်သောက်တေ အစရှိသည်ဖြင့်။ ရခိုင်သားတော်တော်များများရေ အရက်သောက်တေဆိုစော်အချက်စော် မှန်လို.ရှိခကေ အရက်သောက်ပြီးကေ အိပ်နီရေ မသောင်းကျန်းဆိုကေ တောင်မှ မကောင်းမှုကိုလုပ်စော်နဲ. တတူပါပျယ်မဟုတ်ပါလား။ အေလောက်စကားကြီး စကားကျယ်တိ ခံနီရစော် အကြောင်းက အဝတ်အစား နဲ. အရှက်သိက္ခာနဲ.စော် ထင်သလောက်ထိ မပတ်သတ်ဆိုစော်ကိုပြောချင်လို.ပါ။
အယင်တလိုင်းက အွန်လိုင်းမှာတွိသော ရခိုင်သမ အပျိုကြီးမမတစ်ယောက်က ပြောလားပါရေ။ ရခိုင်သမချေတိ အဖော်အချွတ်တိ ကောင်းလုပ်လာရေလတ် အရှက်သိက္ခာကို ထိမ်းစီချင်ရေလို. ပြောလားပါရေ။ အကျွန်က မီးပါရေ အရှက်သိက္ခာမရှိဆိုစော် ကို မမ ဇာပိုင်အဓိပါယ် ဖွင့်ပါလေလို.။ ယေမှာ အတိုအပြတ်ဝတ်ခြင်း ကြိုးတချောင်းဝတ်ခြင်း တစ်ချို.ရခိုင်သမချေတိ ရီကူးဝတ်စုံတိ ဝါတ်လို. အင်တာနက်မှာ ဓါတ်ပုံတင်ခြင်း ရို.ကို ဆိုလိုပါရေလတ်။ အကျွန်ကပြောရေ အကျွန်၇ီကူးဝတ်စုံတော့ မဝတ်ဝံ့ပါ။ မလှလို.လို.။ လှကေ ဝတ်ဖို.လို. ရီကူးကေ။ ကျန်စော် မမ ပြောစော်တိကိုတော့ အားလုံးဝတ်ဖြစ်ပါရေလို.။ အကျွန်ရှက်စရာလို.မယူဆပါလို.။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ.ဆိုကေ အဝီးကြီးပါရာလို.။ ဘုရားတောင်မှ ကာလံ ဒေသံ လို.ဟောခမဟုတ်ပါလားလို.။ ယေမှာ မမရို.က ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်းနဲ.နီလာရေ ယိုင်ကျေးရေ လူမျိုးတိဖြစ်လို. ယင်းပိုင်မဝတ်သင့်ပါလို.ပြောပါရေ။ ယဉ်ကျေးရေ လူမျိုးစော် အဝတ်အစားခေါင်းကပင် ခြီအထိ ချုပ်ထားရေ လူမျိုးကိုခေါ်ပါလာ။ ယင်းပိုင်ဆိုကေ ဘူချုပ်ထားရေ ကုလားမတိ၊ ကုလားတိလောက် ယဉ်ကျေးစော်လူမျိုး ကမ္ဘာမှာ ရှိပါသိလား။ အကျွန်ရို. ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကြီးမားရေ ဆိုစော်လက်ခံပါရေ။ အဓိကကတော့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုစော် ဘာသာတရားကို အခြေခံလို. ဖြစ်တည်လာရေ စကားစုလို.ထင်ပါရေ။ သင့်မြတ်ကောင်းမွန်ရေ ဘာသာတရားကို လိုက်စားပြီးကေ လူတိစော် ယဉ်ကျေးလာကတ်စော်ပါ။ အကျွန် Define လုပ်တေ ဘာသာတရားကို အခြေခံရေ ဆိုစော်ကို ငြင်းလို.ရပါရေ။ စာအုပ်တိကို ကိုးကားပြီးပြောနီစော်မဟုတ်တေ အတွက်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်သတ်သတ်ပါရာ။ ယိုင်ကျေးမှုကို ဆွဲထည့်ချင်ရေဆိုကေ ခေတ်ဆိုစော်ကိုလေ့ ထည့်တွက်ရပါဖို.။
အခေါက်ပေါင်းမြောက်များစွာ အကျွန် အေအဝတ်အစားနဲ.ပတ်သတ်ပြီးကေ အငြင်းအခုန်ဖြစ်ခဖူးပါရေ။ လူပေါင်းအများကြီးပါ။ တော်တော်များများကတော့ အသက် ၃၅ ကျော်တိများပါရေ။ Generation Gap လို.နားလည်ပါရေ။ တကယ်လို. အသက်အရွယ်အငယ်ပိုင်းက ဆိုကေတော့ အဂုမှ ရွာကရောက်စ သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်အရုပ်အရည်ဆိုး သော မမချေတိက ကိုယ်ဝတ်လို.မလှလို. မဝတ်စော်ကို လူများမမချေတိကို အပုတ်ချလို.သော်လည်းကောင်း၊ တချို.ယောက်ျားချေတိက အငြင်းအခုန်လုပ်ကတ်စော်မှာ ရခိုင်သားမျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ပြချင်လွန်းအားကြီးပြီးကေ အဟင့် ဆို အဟင့် မကောင်းဆိုကေ မကောင်း ပြောမရဆိုမရ တဇူးထိုး လုပ်ကတ်လို.သော်လည်းကောင်း ငြင်းခုန်ကတ်စော်များပါရေ။ အေအကြောင်းကို အရေးတယူလုပ်လို. မပြောစော်လူတိရှိပါရေ။ မျက်စိယဉ်လားဗျယ် ဖြစ်လို.ပါ။ တစ်ခုလေ့ မထူးဆန်းရေ ကိစ္စလို.မှတ်ယူလိုက်လို.ပါ။ တခါတလီ ကိုးရီးယား ထိုင်းရို. ရောက်နီရေ ရခိုင်သားတစ်ချို. ကမ်းခြေတိကို လားပြီးကေ ဘီကီနီဝတ်ထားရေ ကောင်မချေတိနောက်ခံနဲ. (လူလှမလှအရေးမကြီး မမချေတိ အများကြီးပါလီကောင်းလီ) ပုံစံမျိုးနဲ. ရိုက်ထားကတ်စော်တွိရပါရေ။ မမြင်စတ်ဖူး မြင်စတ်ဖူး အဂုမှရောက်တေသိဆိုခါ ကောင်းအထူးအဆန်း ဆာက ကြည့်ရပိုင်တွိကတ်ပါဖို.လားမသိ။ သတိထားပါယေ ယင်းချင့်စော် အရိုက်မတတ်ကေ တရားစွဲလို.ရပါေ၇။ ကိုယ်ကလားလို. မထိ မကိုင်ခီတိုင်း ကြည့်ချင်ပိုင် မျက်လုံးပြူးပါအောင် ကြည့်လို.ရရေ မထင်ပါကေ့။
အေနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်စော်က အတိုအပြတ် အဝတ်အစားရဲသော မမချေတိ အများစုစော် ပါတီတက်၊ ကလပ်လား၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ အရက်သောက် လုပ်တေ၊ ရည်းစားများတတ်တေ ဆိုကေ လက်ခံပါလာ ဆိုကေ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လက်ခံပါရေ လို.ဝန်ခံရပါဖို.။ အများစုလို. စကားခံ ထားပါရေ။ အားလုံးမဟုတ်ပါ။ အဓိက က စတီရီယို တိုက်ပ် လုပ်ပစ်ကတ်လို. ရှိပါဖို.။ အကျွန် ကာကွယ် ပြောဆိုနီရေ အချက်အလက်စော် မမချေတယောက် ကာလ ဒေသ အလျောက် ကိုယ်ဝတ်ချင်စော်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်စားနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း တစ်ခုတည်းရာ ပါပြီးကေ အရက်သောက်ခွင့်ပါမစ်တောင်းနီစော်မဟုတ်ပါဂါး။ ပါတိတ်ချေဝတ် သနပ်ခါးချေ ပကွက်ကွက် ပြီးကေ ဝမ်းကြီးလားရေ ရွာက မမချေတရှိစော်ကို မမိပါကေ့။ စတီရီယို တိုက်ပ် လုပ်စော်ကို နည်းနည်းလျှော့ဖို.လိုရေ လို.ထင်ပါရေ။ ထမီချေနဲ. ပါးကွက်ချေနဲ.နီစော်ကို မကန်.ကွက်ပါ။ အကျွန်လေ့ ကိုယ့်ပြည်ကို ပြန်ကေ ထမီနဲ. ပါးကွက်နဲ.နီပါရေ။ တကယ်လို. မမချေတိ ထိမ်းသိမ်း သင့်ရေဆိုကေ အရက်သောက်စော် တိ၊ ဆလိပ်သောက်စော်တိ၊ ယောက်ျားတကာ နဲ. အတွဲများစော်တိကို ဆွဲလို. ထိမ်းဖို.ပြောရပါဖို.။ ပါတီလားစော်ရေ လုံးဝမကောင်းလို.လက်မခံပါ။ ကိုယ့်ပါးမှာ ဇာတ်ပွဲလားရေ သဘောနဲ.တတူပါရာ။ ကိုယ့်စော်ကို ကိုယ်ထိမ်းနိုင်ဖို.ရာ အရေးကြီးပါရေ။ အခုက အတိုချေဝတ်ကေပင် ကိုယ့်သိက္ခာထိမ်းကတ်ပါပျင်နီကတ်ခါ အေလူ စာမတတ်လီလာချင့်လို. ခံစားရပါရေ။
မမချေတိဖက်ကလေ့ ပျင်သင့်စော်တိ ရှိပါရေ။ အခုခေတ်မှာ တော့ အတွဲများစော်ပေါ့။ ကြားရပါရေ အများကြီးပါရာ။ မယူပဲ တတူနီရေအကြောင်း၊ တယောက်လက်က တယောက်ပြောင်းလခရေအကြောင်း။ ၃ယောက်လောက် ရည်းစားရှိမှ ဂုဏ်တက်တေလို. ထင်ကြောင်း။ ယင်းချင့်တိကတော့ နည်းနည်းလွန်လားဗျယ်ထင်ပါရေ။ အဓိက က ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ.ပတ်သက်ပြီးကေ မဖောက်ဖျက်ဖို.လိုပါရေ။ အမိ အဖ ဂုဏ်သိက္ခာ ကိုထည့်လို.တွက်ရပါဖို.။ အကျွန်.အမိအဖစော် ထော ခိုင်ဝေဇံ မီနီစကပ်ဝတ်လို.လတ်ဟေး အေပိုင်လေ့ရှိလာ ဆိုလို အကျွန်.ကို ဆဲဖို.အမိအဖမျိုးမဟုတ်ပါ။ အကျွန်..အသက်အရွယ်မှာ ကိုယ့်အဝတ်အစားကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဝတ်ခွင့်ရှိရေ။ ငါ့သမီးစော် ညဏ်နဲ. ပညာနဲ. အတိုင်းထက်အလွန်လုပ်ဖို.မဟုတ်လို. ယုံပါရေ။ အမိရို.ရှိကတော့ အကျွန်လေ့ မဝတ်ပါ။ အေး နင့်သမီးမှာ ရည်းစား ၃ ယောက်လောက်ရှိရေ လတ်ထော၊ မူးလို. ရူးလို.ထော ဆိုကေတော့ ဒုံးပျံစီးလို. ရခိုင်အလံလွှင့်လို. ဓါးကိုင်လို. လိုက်လာကတ်ဖို.။
အိမ်း အေပိုင်စော် စာကို အေအမ်ပီမှာ တင်ပစ်ခီကေ ဘလောက် အဆဲခံရမေ မသိ။ အခုကိုယ့်ဘလော့မှာကိုယ် ဆိုခါ အရေးမကြီး။း) အေအမ်ပီလေ့ နိုင်ငံရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပုံစံ ဖြစ်လားဗျယ်လို.ပြောပါယင့်။ ကောင်းပါရေ။ အားလုံးသူ လက်လှမ်းမှီရေ နိုင်ငံရေး ဘလော့တစ်ခုဖြစ်လီကေလေ့ ကောင်းရေမဟုတ်ပါလားရေ။ အကျွန်.အနေနဲ. ဆိုကေ တော့ အေအမ်ပီကို ဝင်ပစ်ခီလို. ရခိုင်ကို တဖေ့ချေပိုလို. ချစ်လာရေလို. ပြောလို.ရပါရေ။ အေကနီ အေထက် အဆ အောင်မြင်ပါစီလို. ဆုတောင်းပီးလိုက်ပါယင့်။ ယေကေလေ့ ရခိုင်သားတိ ရခိုင်သမတိ အဝတ်အစား ကိုနားလည်ပီးနိုင်ပါစီလို.တော့ ဆုမတောင်းဗျယ်။ ဆုတောင်းကေလေ့ နားလည်နိုင်ဖို.မဟုတ်ဆိုစော်ကို သိလို.။ နားမလည်ပီးနိုင်ကေလေ့ အပြောင်းအလဲတိကို ရင်နာနာနဲ. ထိုင်ဆဲရုံကလွဲကေ တခုလေ့လုပ်လို.ရလီဖို.မဟုတ်။ ပြောင်းစရာရှိစော်တိကတော့ ပြောင်းလီဖို.စော်ပါရာယေ။